Iza moa izahay - Bruicojewelry Accessories Co., Ltd
Jewelry Bruico manome firavaka matihanina customization, famolavolana, ny famokarana sy ny fanodinana asa, indrindra fa mifantoka amin'ny 14K sy 18K Mosaic raharaham-barotra. Jewelry Bruico dia naorina teo an 2015 sy mitana ny faritra ny 500 metatra toradroa, izay manana ny orinasa, milina fanontam-pirinty, Nikosokosoka milina, CNC milina sy ny herinaratra milina.
Tsy manome ny matihanina firavaka famolavolana sy famokarana asa. Efa nanao zava-bita lehibe sy nametraka ekipa matihanina mikasika ny fividianana, varotra, Admin, fitantanam-bola sy ny varotra. Amin'izao fotoana izao ny orinasa manana mpiasa 50, 3 endrika sy 2 sary teknisiana. Ny ekipa ny tanora sy mavitrika, miaraka amin'ny fanahy sy ny mpanao asa tanana mahafinaritra lamaody tsara tarehy heviny. Afaka mamaly ny mpanjifa ny fepetra ao anatin'ny 48 ora.
Manana traikefa manan-karena amin'ny famolavolana sy famokarana firavaka. High quality azo antoka sy azo itokisana. Ny vokatra manana isan-karazany ny fampiasana, toy ny fankalazana eo intimates, saotra ho fisondrotana, fanomezana ho an'ny zava-nitranga lehibe. Ny baiko dia indrindra fa avy any akany fivarotana firavaka, mahaleotena sy BOUTIQUES endrika.